Venezuelan Maduro dọrọ aka na ntị nke onye ndu ndị mmegide "ga-abịa" - TELES RELAY
Venezuelan Onye isi ala Nicolás Maduro dọrọ aka na ntị na Fraịde na njide nke onye ndu mmegide Juan Guaidó, onye nwere nkwado nke United States na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba 60 ọzọ, "ga-abịa".
Maduro kwuru nke a ná nnọkọ mgbasa ozi ụbọchị atọ mgbe Guaidó si njem nke United States na Europe lọghachi, na nlelị nke ikike ụlọ ikpe na-egbochi ya ịhapụ mba ahụ.
N'agbanyeghị iwu ahụ, ndị ọrụ Mbugharị hapụrụ Guaidó ka ha banye mba ahụ mgbe ha rutere n'ụgbọ elu azụmahịa na ọdụ ụgbọ elu mba mba Venezuela. Ndị na-akwado gọọmentị na-eme ngagharị iwe ebe ahụ fesa ya mmiri mmiri ma jide uwe elu ya ka ọ na-agagharị n’etiti ìgwè mmadụ.
Onye isi ala Venezuela bụ Nicolas Maduro jidere otu akwụkwọ ikpe obodo ya wetara na International Criminal Court maka mmegide US n'oge mkparịta ụka ndị isi na Presidential Palace nke Miraflores na Caracas, Venezuela, na Fraịde. (AP)
Maduro kwuru na Fraịde na a ga-atụ Guaidó mkpọrọ ụbọchị ụbọchị usoro ikpe ziri ezi nke Venezuelan kpebiri na a ga-atụ ya mkpọrọ "maka mpụ niile o mere".
GUAIDO zutere ndị na-eme ihe ngosi na VENEZUELA AIRPORT
"Daybọchị ahụ abịabeghị," ka o kwuru n'ịza ajụjụ site na Associated Press. “Ma ọ ga-abịa. "
Ma ndị nyocha na ndị mmegide nke Maduro na-arụ ụka na enweghị ike ịhụ usoro ikpe ziri ezi nke Venezuelan dị ka onye nweere onwe ya na ngalaba ndị isi yana na ọ na-arụ ọrụ nke ọma dịka ogwe aka nke ike ọchịchị.
Njem Guaidó mere nke ugboro abụọ ọ gara na mpụga nke Venezuela n'agbanyeghị mmachibido iwu ahụ. N'oge abụọ a kwere ka ọ laghachi n'ụlọ.
Onye ndu otu mgbagha Juan Guaido gbafere ndị na-akwado ya oge mgbako na Bolivar Plaza na Chacao, obodo dị na Caracas, Venezuela na Tuesday. (AP)
Pịa ebe a ka ị nweta FOX NEWS APP
Onye isi mmegide a nke gbara afọ 36 nọ na ndọrọndọrọ ike ya na Maduro kemgbe ọ kwupụtara na ya bụ onyeisiala kwesịrị ọchịchị obodo ahụ n'afọ gara aga. Njem njem mba ụwa ikpeazụ nke Guaidó, n'oge nke ọ zutere President Trump na White House, bụ nnwale iji kwado nkwado ya ka ndị na-emegide ọchịchị ya na-agba mbọ nwetaghachi ike na Maduro na-eme ka ikike ya sie ike.
Guaidó meriri nkwado nke United States na ọtụtụ mba ndị lere ntuli aka nke Maduro na 2018 anya dị ka aghụghọ ma boro amụma ya ọhaneze maka nsogbu na-akpata oke mbugharị ma na-eyi egwu nkwụsi ike nke mpaghara ahụ.
Andrew O'Reilly, Danielle Wallace na Associated Press nke Fox News nyere aka na akụkọ a.
Asịrị na Apple iPhone 5G nwere ike ịnwe antenna arụrụ n'ụlọ